Indawo yaseLazarevskoe eSochi yindawo ethandwa kakhulu abavakashi abavela emhlabeni wonke. Lapha kukhona konke okudingekayo kumhambi wamanje. Noma yikuphi ukuzijabulisa okucatshangwayo, izindawo zokudlela, amabhishi - konke lokhu okukuphela kwakho. Enye yezindaba ezibaluleke kakhulu ezikhathazayo bonke abakhiqizi bezokuvakasha yizindlu. Akunzima ukukuthola lapha. Amakamelo ahlukahlukene akhululekile anikezwa yisifunda saseLazarevskoye. Amahhotela ogwini alungele ukuvula iminyango yakho kuwe noma kunini. Isevisi enhle kakhulu, abasebenzi abanobungane nabawusizo bayolungisa indlela efanele futhi basize ukwenza ukuhlala kwakho kungalokothi kukulibaleke.
Ihhotela «Black Sea»
I-Lazarevskoye iyindawo ewuthandayo yokuphumula hhayi kuphela kubantu bakuleli dolobha, kodwa nakwabavakashi. Ukuze uzizwe ukhululekile lapha, khetha ihhotela elihle kakhulu "uLwandle Olubomvu" ngokuhlala kwakho. Itholakala ngamamitha angaba ngu-30 kuphela kusukela ebhishi lesichibi. Eduze kukhona i-dolphinarium, i-aqua park, i-aquarium. Kuyoba okuthakazelisayo ukuvakashela lapho hhayi kuphela izingane, kodwa nabantu abadala. Ungakwazi ukunambitha izitsha zokudla kwendawo ezindaweni zokudlela eziseduze ngokwanele.
Ngaphezu kwebhishi nokuzijabulisa okuhlinzekwa yi-Lazarevskoye microdistrict, amahhotela olwandle anikezela izivakashi izinkonzo ezinhle kakhulu futhi uhlu olubanzi lwezinsizakalo. Ihotela "uLwandle Olubomvu" liqukethe izakhiwo ezimbili. Zine amakamelo angu-29 kuphela. Enkonzweni yakho kukhona ichibi lokubhukuda, i-sauna, indawo yokudlela yasebhiya, i-cafe, yokupaka okulindile. Engxenyeni yehhotela kunekamelo elithambile elenziwe ngesikhwama sezinkuni. Inezindlu zokulala ezimbili negumbi lezihambi. Ngaphezu kwalokho, leli cottage linamachibi ahlukene, i-sauna namabhilididi. Ekamelweni kukhona izinhlelo zokuhlukanisa. Intengo yokuqasha ihlanganisa ukupaka endaweni yehhotela.
Eduze echibini kukhona i-cafe encane epholile. Lapho, ngesikhathi esithile, kunezikhathi zokuphumula zokudla okumnandi, izidlo kanye nama-dinners ngesikhathi esithile. Ungafika lapha nganoma isiphi esinye isikhathi esikahle kuwe futhi uhlele isidlo kusuka kwimenyu. Umpheki ulungisa ukudla okulula okumnandi, ama-saladi, izitsha zokuqala nezesibili, ezinganelisa ngisho nokuthanda izinto ezinhle kakhulu. Eduze kukhona i-BBQ enkulu. Kungasetshenziselwa ukuzipheka.
Kokuvakasha, kunamathuba amaningi e-Lazarevskoye microdistrict. Amahhotela eduze nolwandle anikeza izinsizakalo ezengeziwe, ezikhokhelwa ngokwehlukana. Ihhotela "uLwandle OluMnyama" linikeza izivakashi zalo ngezidingo ezilandelayo: ukufaka izinsimbi, ukugeza, ukudla okuyisithathu ngosuku, ukulethwa kokudla egumbini, i-sauna, ihhovisi lamazinyo, ukudlulisela ukusuka futhi ukuya esikhumulweni sezindiza. Ngaphezu kwalokho, ngokusho kwe-oda yakho, ukuvakasha kokukhangayo kwendawo, kuhlanganise namanzi, ama-dolmens, ama-gorge, amapulazi e-trout, ahlelekile .
Ihhotela elincane "i-Maestro"
Idume phakathi kwabavakashi kanye namahhotela amancane. I-Lazarevskoe inikeza ukukhethwa okukhulu kwamahhotela amancane. Phakathi kwabo, ungakwazi ukubona "i-Maestro". Itholakala eduze nogu. Kuphela ngamamitha angu-800 ukusuka ogwini.
Ihotela linamakamelo angu-37. Ngamunye wabo une-air conditioning, i-TV, ucingo, izinwele zokugqoka izinwele, i-kettle kagesi, isiqandisisi, izitsha. Indlu yokugezela ihlanganisa izindlu zangasese, amathawula, ama-bathrobe, ama-slippers. Ngaphezu kwalokho, kukhona konke okudingekayo ekwenzeni ikhofi kanye netiye. Amakamelo angabhemi ukubhema, ngoba imindeni namakamelo ane-soundproofing anikezwa.
Yiba nesidla noma uhlele ukudla okudliwayo okudliwayo, isidlo singasendaweni zokudlela nezindawo zokudlela ezikude. Kukhona ukungena kwenethiwekhi okungenazintambo kuyo yonke indawo. Izivakashi zingasebenzisa ukupaka mahhala. Ukuvakasha kuhlelwe ngesicelo sakho.
Ukwamukelwa kuvulekile nxazonke. Izakhiwo zokudonsa ziyatholakala uma kuceliwe. Izindawo ezikhethekile zigcinwe ukubhema. Kunezinketho zokungena kokuqala nokuphumula. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokubhalisa ngabanye lungenzeka.
Indlu yezindwendwe «usuku lukaTatyanin»
Ngesikhathi esisodwa empilweni yami kufanelekile ukusebenzisa iholide lakho ogwini lolwandle oluMnyama futhi ufike eLazarevskoe. Ukuphumula kuyoba okungavamile uma uhlala endlini yezihambi zakwaTatyanin Day.
Eduze ehhotela kukhona intaba enhle kakhulu emfuleni iPsezuapse. Imakethe esemaphakathi ihamba ngezinyanga ezingu-15 kuphela. Ingaphakathi lihlotshiswe ngemibala efudumele, ethule, amakamelo anikezwe ifenisha entsha. Amafasitela ayibheke olwandle noma izizathu zehhotela. Izivakashi kanye nezivakashi ezisebenza ikhofi esitolo. Ihlela ukudla kwasekuseni, kwasemini nasekuseni ngesikhathi esimisiwe. Ibha inikeza ikhofi neziphuzo. Indlu yokuhlala inezindlu zokubhukuda kanye ne-sauna. Ntambama, izivakashi zingaya ogwini. Lapha ungakwazi ukushisa ilanga, ukubhukuda, ukushushuluza kwamanzi, i-catamaran. Ngesicelo, ukuvakasha kanye nokudluliselwa kungahle kuhlelwe kusuka esiteshini sesitimela. Izinsizakalo ezingeziwe zifaka ukuhlanza, izindawo zokunakekelwa kanye nokukhishwa kwamakethi.
Ihhotela "Vakashela" (Lazarevskoye)
Amahhotela eduze nolwandle athola izivakashi ngezizathu eziningi. Okokuqala, baseduze nolwandle. Noma kunini lapho ungaya khona ukushisa ilanga. Ngaphezu kwalokho, amafasitela ala mahhotela anikeza umbono omuhle kakhulu. Ihotela "Vakashela" eLazarevsky itholakala elwandle oluhle kakhulu.
Kuvame ukhethwa ngoba isiteshi sesitimela siseduze kakhulu nayo, ngamamitha angu-150 kuphela. Ibanga elifanayo ukusuka kulo kanye nepaki enkulu yamanzi. Emkhatsini wehhotela kunezinkomishi eziningi, izitolo nezitolo zokudlela. Lapho uthenga, ngeke uqaphele ukuthi isikhathi sihamba kanjani. Izinhlobonhlobo eziningi zezinkumbulo, izindiza zokugqoka nezimfashini ezishaya imfashini kanye nezigqoko nje kuphela eziqabulayo!
Kulula nje ukuphuma lapha ngaphandle kokuthenga. Abathandi bezitolo ngokuqinisekile bayothanda iLazarevskoe. Ulwandle, amahotela, ama-boutiques, abantu abanobungane - yini enye edingekayo ukuze ujabule?
Uma ungabanye abantu abangakwazi ukuhlala usuku ngaphandle kwemidlalo, khona-ke enkonzweni yakho - inkundla enkulu. Kuseduze. Kukhona ama-rollreader, kukhona ama-simulator for exercise exercises. Ngaphezu kwalokho, kunezenzakalo ezivusa amadlingozi njalo. Konke lokhu kuqinisekile ukukhalela abantu abakhuthele.
Imigwaqo e-Cobbled, izitolo ezinhle, ukuthula nokumsulwa emoyeni kulindelekile epaki elihle leLazarevskoye microdistrict. Amahhotela asogwini olwandle athandwa kakhulu minyaka yonke ngenxa yenani elikhulu lamathuba abavakashi. Eduze ehhotela kunepaki yamanzi. Vakashela it nezingane! Kuzoba yisikhathi esingenakulibaleka empilweni yengane yakho.
Ihhotela linamakamelo angu-28 akhululekile. Ingaphakathi lihlotshiswe ngesitayela sesitayela. Akukho lutho olungenakuqhathaniswa, oluqaphele futhi olungavamile. Konke kugcinwa ngamathoni athule, ifenisha entsha. Ikamelo ngalinye linesitsha esiqandisini, isimo se-air conditioning, i-TV, ucingo, amatafula okulala, izihlalo zokuhlala. Indlu yokugezela ifakwe eshaweni. Amathawula, izinsimbi zomzimba nezinwele zangasese zihlinzekwa yihhotela.
I-Lazarevskoye iyindawo enhle yokuphumula nomndeni wonke. Ihhotela linikeza ukufinyelela kwi-inthanethi engenazintambo. Amakamelo anakho konke okudingayo ekwenzeni ikhofi netiye.
Ihotela linamakamelo amakilasi ahlukene. Izindleko zabo zihluke kakhulu. Intengo yekamelo ingancishiswa uma uyibhala kusengaphambili. Ngale ndlela uzosindisa imali ebalulekile.
Inqwaba yamakholomu nezindawo zokudla zikhona eLazarevskoye microdistrict. Ulwandle, amahotela, ukuhamba, amabhishi, ukuzijabulisa - konke lokhu kuyashukumisa isifiso sokudla. Ukudla kungenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu kuwo wonke amaholide. Eduze ehhotela kunezinkomishi nezindawo zokudla eziningana. Kunezitsha zokudla ezihlukahlukene. Kufanele uzame ngamunye wabo. Imenyu ithuthukiswe ngokucophelela kakhulu, ngoba abakwa-holidaymakers bavame ukuba nenambitheka eyinkimbinkimbi kanye nokuhlangenwe nakho okukhulu ekunambeni izitsha zakwamanye amazwe.
Izindawo zokudlela zikhululekile kakhulu. Ngemuva kokuhamba edolobheni bese uhlola ukuheha kwabantu nokwenyama, ngokuqinisekile uzoya komunye wabo.
Indawo yokudlela "Lilia" ithandwa kakhulu. Kusuka ehhotela "Vakashela" kudinga cishe imizuzu engu-15 ukufika lapho. Imenyu inikeza izitsha zokudla zaseCaucasus naseRussia, iziphuzo ezidakayo nezidakayo. Indawo yokudlela ine umculo obukhoma. Abaculi abaqeqeshiwe bayokujabulela kalula futhi bakwenze udansa.
Ngaphandle komgwaqo ovela ehhotela ngukudlela "Izipho zoLwandle". Ihambisa ukudla kwaseYurophu naseFrance. Kuwo wonke unyaka, ungazama okuhlukahlukene, futhi okubaluleke kakhulu - ukudla okunesidlo sasolwandle okungavamile. Ngesidlo ngasinye, khetha isiphuzo esifanele. Uma ungavumelani nokukhetha kompheki, khona-ke ungakwazi ukuyala iwayini noma yisiphi esinye isiphuzo sokuphuza okuthandayo.
Ihhotela Al Bostan 4 (Charm El Sheikh, Egypt)
Ihhotela Malin Patong ex Mussee Patong 3 * (Thailand, ePhuket.): Ukubuyekeza, izincazelo kanye nokubuyekeza
Feodosiya amahhotela amanani, ukubuyekezwa. Amahhotela Private Feodosiya
Izihibe Ifenisha: ukufakwa, ukulungiswa, ezihlukahlukene
Irina Rossius - elidumile TV umethuli
Zimane nje indlela ukudlala upiyano Ngifuna! Fundisa !!!
El Mouradi Palace 5 * (Tunis, Sousse): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza